Garaagarummaa qabiyyee tamsaasaa ESAT fi EBC adda baafachuun yeroo kanatti rakkisaa dha! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGaraagarummaa qabiyyee tamsaasaa ESAT fi EBC adda baafachuun yeroo kanatti rakkisaa dha!
Loogoo qofaan isa tokko kaanirraa adda baafattu. ESAT kan EZEMA, EBCn kan Bilxiginnaa ti. Dhugaa kana haaluuf deebii qondaalli Bilxiginnaa har’a OMN irratti kenne seeqachiisaa dha. Gaaffii gaazexessaan ‘Bilxiginnaa fi EZEMAn walitti dabalamuuf deemu jedhuun dhugumaa?’ jedhee gaafateef ”sagantaan keenya lafaa fi samii dha,” jechuun jalaa miliquu yaale. Warri qabiyyee ololaatiin wal fakkaatu lachuu Bilxiginnaa akka ilma haaraa dhalateefitti rifeensa susukkuumee itti tufaa adda keessa dhungatu jaruma lachuu dha. Qabiyyeen olola miidiyaalee isaaniis kanaaf akka dhala lakkuutti wal fakkaatti. Wal fakkeenya jaraa akkanatti haalanii ummata shawwadanii dabruun hin danda’amu.